ဒေါင်လိုက်ဝက်အူပေါ်ကို၏ဝက်အူ၏လှည့်မြန်နှုန်းသာမန်ဝက်အူပေါ်ကို၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ centrifugal အင်အားသုံး၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအရ, ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းနှင့်ဝင်းအကြားထုတ်ပေးသည်။ ဤသည်ပွတ်တိုက်မှုအရှင် material.This စက်အစီးအနင်းအရေအတွက်, အစီးအနင်းအမြင့်, အမြန်နှုန်းလှည့်မြင့်မားတဲ့သေးငယ်တဲ့အငယ်စားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပမာဏ၏ဒေါင်လိုက် conveying ဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်ခြင်း, လိမ်ဓါးနှင့်အတူလှည့်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများ၏မြေထုဆွဲအားကဆင်းကျသွားအောင်မြင်သောထံမှပစ္စည်းကာကွယ်ပေးသည် big.It ပစ္စည်းများရုတ်သိမ်းရေးတို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်ကောင်းသောအရာကိုလျော့ပြေအတူမှုန့နှင့် granular ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ အဆိုပါရုတ်သိမ်းအမြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကပို 8 ထက်မီတာဖြစ်ပါတယ်။
စက်အတွက်အောက်ခြေမှာတက် piling အဆိုပါပစ္စည်း၏ဆွဲငင်အားနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် slot ကစက်အကြားပွတ်တိုက်အားကြောင့် slot ကစက်, ပစ္စည်းအတွက် fixed သို့ပစ္စည်းအဆိုပါ helix နှင့်အတူလှည့်, သာမှမောင်းနှင်နေတဲ့အလှည့် helical Vane ထဲမှာမပါဘူးတဲ့အခါမှာ material.The စက်သယ်ဆောင်၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်, ဘာသာပြန်ချက်, ရွေ့လျားမှုများအတွက်ဝက်အူ၏လည်ပတ်တစ်လျှောက်ခွံမာသီးအလှည့်ကိုမကဲ့သို့ရှေ့ဆက် multi-အချက်တင်ချဘို့အဆင်ပြေသည်,, ရောစပ်နှိုးဆော်သို့မဟုတ်သယ်ဆောင်စဉ်အတွင်းတစ်ပြိုင်နက်အအေးနိုင်ပါသည်။ Overload မှအထိခိုက်မခံ, plug ရန်လွယ်ကူ; အဆိုပါပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကိုနှိမ်နင်းခဲ့ပြီးအလျားလိုက်ဝက်အူပေါ်ကိုများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, install ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် troubleshoot ရန်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါသည်။
အလျားလိုက်သို့မဟုတ်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်အနည်းငယ်ရှိုစဉ်ဆက်မပြတ်ယူနီဖောင်းများအတွက်သင့်လျော်သော, ပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -20 ~ 40 ℃, ပစ္စည်းသယ်ဆောင်များအတွက်အပူချိန် - မြန်နှုန်းလှည့် 20 ~ 80 ℃ .Its အဓိကအားဖြင့်အလျားလိုက်များအတွက်အသုံးပြုသောဒေါင်လိုက်ပေါ်ကိုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးနိမ့်သည် သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများအဘို့အသေးငယ်တဲ့အကွံလွှဲပြောင်းခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကွာအဝေးယေဘုယျအားဖြင့် 70 မီတာထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။
(3) ပိုက် (roller ပေါ်ကို) ပေါ်ကိုဝက်အူ
အဆိုပါလိမ်ပြွန်ပေါ်ကိုယင်းဆလင်ဒါ shell ကိုအတူတကွလိမ်ဓါးနှင့်အတူလှည့်, အ cylindrical shell ကိုအတွင်းအပြင် welded တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်လိမ်ဓါးဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့် centrifugal အင်အားသုံးနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းငှါ, ဆက်ပြောသည်ပစ္စည်းအိမ်ရာတွေနဲ့လှည့်နှင့်ချီသောပစ္စည်းနားလည်သဘောပေါက်မှသကဲ့သို့, ထိုကြောင်လိမ်မျက်နှာပြင်တလျှောက်တွင်မြေထုဆွဲအားနဲ့ဆလိုက်၏အရေးယူမှုအောက်မှာပစ္စည်း, ရှေ့ဆက်ဖို့လိမ်ပိုက်လည်ပတ်အတူပစ္စည်းဖြစ်စေလျက်, ပစ္စည်းသယ်ဆောင်၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်, ဘာသာပြန်ချက်, ရွေ့လျားမှုများအတွက်ဝက်အူခွံမာသီး၏လည်ပတ်တစ်လျှောက်လှည့်မပေးလိုပဲ။
အနိမျ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်; အဆုံးမှာအစာကျွေးသောအခါ, မညီမညာဖြစ်နေသောနို့တိုက်ကျွေးရေး၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပြီး, တူညီတဲ့ time.It မှာထိုကဲ့သို့သော, သယ်ဆောင်နှိုးဆော်နှင့်ရောစပ်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ် Multi-အမှတ် load နှင့်ရြဖို့အဆင်ပြေသည်, အတူပစ္စည်းများကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ် ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ပစ္စည်းများအလျားလိုက် conveying များအတွက်သင့်လျော်သော, ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်, မညီမညာဖြစ်နေသောပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေး, Anti-ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ် Multi-အချက်တင်ချလိုအပ်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူပစ္စည်းများမှအကောင်းတစ်ဦးအလိုက်အထိုက်နေတတ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ကြောင့်ဘိလပ်မြေ clinker ခြောက်သွေ့ထုံးကြောကျ, ဖော့စဖိတ်သတ္တုရိုင်း, ilmenite အမှုန့်, ကျောက်မီးသွေးနဲ့ slag ပို့ဆောင်အတွက်ထိရောက်သောကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
အဆုံးဝင်ပေါက်မှာထည့်သွင်းပစ္စည်းအမှုန်အရွယ်အစားဝက်အူ၏ 1/4 အချင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်လွတ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအလယ်အလတ် feed ကိုဝင်ပေါက်ကနေပစ္စည်းအမှုန်အရွယ်အစား 30mm ထက် သာ. ကြီးမြတ်လွတ်လိမ့်မည်။ ယင်းဆလင်ဒါအပူချိန် 300 ℃အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်အားသွင်း, ပုံပျက်သောထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးသေချာစေရန်အလို့ငှာ။ ကုန်ကြမ်းသယ်ဆောင်သည့်အခါဓါးနှင့်ကျင်း၏ပွန်းပဲ့အလွန်လေးနက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်၏ဝက်အူ mandrel ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့် conveying လိုင်းအာကာသကွေးသည်နှင့်အညီစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ layout ကိုညီအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက် (ကြီးမားသောသို့ကျဆင်းလာ) အပိုင်း၏အရှည်အချိုးအစားအရ၎င်း၏အလုပ်လုပ်နိယာမသာမန်ဝက်အူပေါ်ကိုသို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ဝက်အူပေါ်ကိုအညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ယင်းထုတ်လွှင့်လိုင်းများအတွက်မတရားဖမ်းဆီးပစ္စည်းလွှဲပြောင်းအခြေအနေမှရှောင်ရှားရန်အာကာသကွေးသည်နှင့်အညီစီစဉ်ပေးခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း, အလွန်အကျွံပစ္စည်းသို့မဟုတ်ခက်ပစ္စည်းစက် shell ကိုထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်သောအခါ, လိမ် blocking.The ဆူညံသံမပါဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ် float လိမ့်မယ် small.It အဓိကအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပစ္စည်းအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက် conveying အသုံးပြုသည်ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်ခြင်း၏မြန်နှုန်းယေဘုယျအားဖြင့်ဒေါင်လိုက်ဂီယာအတွက် 1000r / မိနစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-15-2018